सोमबारको दिन किन गरिन्छ भगवान शिवको पूजा ? जान्नुहोस् - Mitho Khabar
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on सोमबारको दिन किन गरिन्छ भगवान शिवको पूजा ? जान्नुहोस्
काठमाडौ । भगवान शिवलाई प्रथम देव मानिन्छ। यो संसार नै शिवको उत्पत्ति रहेको धार्मीक मान्यता छ। शिव भगवानको पुजा सोमबार गर्ने गरिन्छ। किनकी सोम को अर्थ हो ऊँ सहित ।
त्यसैले सोमबारको अर्थ भयो, ऊँसहितको दिन । अर्थात जुन दिन शिव भगवानको पूजा गरिन्छ, त्यो दिन नै सोमबार हो।ऊँ अर्थात प्रथम देव । त्यसैले सृष्टीमा पहिलो देवता शिव हुन्। शिव कारणभूत हुन्। कुनै पनि चीज हुनुको कारण शिवलाई जान्छ। शिवको पाँच मुखपञ्चतत्व हुन्।जुन जीवन उपयोगी छन्। जल, वायु, आकास, अग्नि र जमिनमा नै जीवको निर्माण भएको छ।
सोमको अर्को पनि अर्थ छ उमासहित । अर्थात माता पावर्तीसहित शिव । त्यसैले यो दिन शिवसँगै माता पावर्तीको पनि पुजा गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ। सोमबार शिव भगवानको पुजा गर्दा सुख र सौभाग्य बढ्ने धार्मीक विश्वास छ।त्यस्तै सोमको अर्थ हुन्छ सान्त। शिव शान्त र समाधिमा रहने देव हुन्। जसका कारण सोमबार शिवको पुजा गर्नु उत्तम मानिन्छ।पुराणका अनुसार सोमको अर्थ हो चन्द्रमा । किनकी चन्द्र शिवको मुकुटमा रहने गर्दछन्। त्यसैले सोमबार शिवको पुजा गर्दा चन्द्रदेव पनि प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ।
भगवान शिवलाई प्रथम देव मानिन्छ। यो संसार नै शिवको उत्पत्ति रहेको धार्मीक मान्यता छ। शिव भगवानको पूजा सोमबार गर्ने गरिन्छ। किनकी सोम को अर्थ हो ऊँ सहित । त्यसैले सोमबारको अर्थ भयो, ऊँसहितको दिन । अर्थात जुन दिन शिव भगवानको पुजा गरिन्छ, त्यो दिन नै सोमबार हो।ऊँ अर्थात प्रथम देव । त्यसैले सृष्टीमा पहिलो देवता शिव हुन्। शिव कारणभूत हुन्। कुनै पनि चीज हुनुको कारण शिवलाई जान्छ। शिवको पाँच मुखपञ्चतत्व हुन्।जुन जीवन उपयोगी छन्। जल, वायु, आकास, अग्नि र जमिनमा नै जीवको निर्माण भएको छ।
सोमको अर्को पनि अर्थ छ उमासहित । अर्थात माता पावर्तीसहित शिव । त्यसैले यो दिन शिवसँगै माता पावर्तीको पनि पुजा गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ। सोमबार शिव भगवानको पुजा गर्दा सुख र सौभाग्य बढ्ने धार्मीक विश्वास छ।त्यस्तै सोमको अर्थ हुन्छ सान्त। शिव शान्त र समाधिमा रहने देव हुन्। जसका कारण सोमबार शिवको पूजा गर्नु उत्तम मानिन्छ।पुराणका अनुसार सोमको अर्थ हो चन्द्रमा । किनकी चन्द्र शिवको मुकुटमा रहने गर्दछन्। त्यसैले सोमबार शिवको पुजा गर्दा चन्द्रदेव पनि प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ।
October 30, 2020 mithokhabar